Filtrer les éléments par date : jeudi, 02 décembre 2021
jeudi, 02 décembre 2021 20:35
Io na fafanao aza ny compte nao, efa vita capture daholo io
Fahendrena manaja tena mialà, rehefa tsy zakanao ilay toerana NAMPINDRAMINA anao, fa tsy hoe nanohana ny filoha ianao dia mahazo valisoa.
Raha za aloha ny teo amin'ny toeran'ny Filoha, na mety manana ny marina aza ianao dia nangatahiko taminao ny fialanao, rehefa tsy mahay miala dia andron'iny dia voaroaka.
Tsy midika akory hoe manana ny marina koa ilay minisitra iray, fa izy fetsy lavitra nahay ni camoufle noho ianao manta vava tety imason'olona, nefa ianao vice-ny, izany hoe eo ambany fiadidiany, sur fa hiteny izy hoe, mialà rehefa tsy mahazaka feheziko.
jeudi, 02 décembre 2021 20:10
Fihaonana tamin'ireo solontena, tompon'andraikitry ny fikambanan'ny mpianatra
Nifampidinika momba ny fandraisana andraikitry ny tanora eto amin'ny Firenena.
Ny zava-misy iainan'ny mpianatra, ny famoronana asa, ny mpianatra maro vita fianarana tsy mahita asa, na asa tsizarizary, nefa ny firenena tantanan'ny olona tsy nianatra ny ambaratongam-pahefana maro.
Mpianatra efa 5è année taranja samihafa izy ireto, misy ny efa miasa ihany koa no mbola manohy fikarohana sy fianarana, avy amin'ny faritra samihafa.
Hamory ireo mpianatra namany sy ireo fikambanana hafa izy ireo hanohizana ny fiaraha-midinika sy ny tokony atao.
Samy resy lahatra fa ny tanora nandia fianarana dia tokony ho ivon-toeran'ny fampandrosoana ny faritra tsirairay.
jeudi, 02 décembre 2021 15:37
2 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage.
jeudi, 02 décembre 2021 15:36
Kaominina Amboditandroroho Toamasina II : Nofefen'i Filatex ny tany, tsy afaka miditra ny mponina
Tsy nahasakana ny Filatex namefy ny tany ny fokonolona, izy ireo rahateo niaraka tamin'ny EMMO nalefan'ny préfet.
Ny ady mbola eny anivon'ny Tribonaly, fitoriana napetraky ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN'NY MPAMBOLY MANAMBATSIO) ivondronan'ireto fokonolona izay efa nanajary sy nahazo taratasy momba ny tany.
Raha tsiahivina dia tamin'ny taona 1923 no nalain'ny colon ny tany, ka rehefa lasa izy ireo, dia ny fokonolona no nanamasaka sy nanajary ny tany, ary dia nahazo taratasy sy kara-tany mazava ireo mponina eo.
jeudi, 02 décembre 2021 09:41
Tontolo iainana : Ireo mpiaro azy indray no mandoto azy
Ianao vao mifoha maraina, manokatra fb iny, tonga dia ady an-tsena mandoto tontolo iainana no hitanao.
Iza ireto hoy ianao, kay ry zareo minisitra roa n'ny tontolo iainana ireto mandoto ny tontolo iainanao ireo.
Prezida ô, efa ampy anay ilay vehivavy roa nanao ady antsena be reny, dia izao misy hafa indray ireto.
Leo zahay ka, tandremo sao hipitika aty amin'ny bois de rose aty ny afonareo, ka ho may ny ala arovana sy ny stock mihamanify am-pitoerana an.